Nzube na-azaghachi na Nchọpụta Nchọgharị Mobile | Martech Zone
Otu n’ime ihe kpatara na anyị butere ihe na-ebute saịtị anyị n’elu igwe okwu kachasị mma abụghị naanị mkpọtụ niile Google na ndị ọkachamara na-eme na oghere SEO. Anyị na-ahụ ya maka onwe anyị na nyocha nke saịtị ndị ahịa anyị. Na ndị ahịa anyị nwere saịtị na-anabata, anyị nwere ike ịhụ nnukwu mmụba na nyocha ọchụchọ mkpanaka yana mmụba na nleta ọchụchọ mkpanaka.
Ọ bụrụ n ’ị naghị ahụ ọtụtụ nleta na nke gị nchịkọta, ị ga-enyocha data webmaster. Cheta, nchịkọta na-atụle ndị mmadụ na-abata na saịtị gị. Webmasters na-atụle otu saịtị gị si arụ na nsonaazụ ọchụchọ - ma ndị ọbịa ahụ pịa n'ezie ma ọ bụ na ọ bụghị. Ka anyị gbanwere ndị ahịa anyị niile na saịtị ndị nabatara n'afọ gara aga, anyị gara n'ihu na-ahụ mmụba mara mma na okporo ụzọ ọchụchọ mkpanaka.
Ma ị mechara emebeghị. Za azịza ya bụ otu ihe, mana ijide ihu na ihu akwụkwọ peeji nke gị ka enyere ndị na-akụ aka aka ha aka. Google Search njikwa enye nkọwa zuru ezu na saịtị gị na ihe ịkwesịrị iji melite maka ahụmịhe ekwentị kachasị mma.
Etu esi enyocha arụmọrụ ekwentị gị
Tụle arụmọrụ ekwentị gị anaghị esiri ike. Banye Njikwa Nchọta Google, ịnyagharịa Chọọ okporo ụzọ> Nchịkọta ọchụchọ, gbanwee nzacha gị na akara ụbọchị, ị ga - ahụkwa etu saịtị gị si aga. You nwere ike ịlele ma pịa gị na echiche. Dịka ị pụrụ ịhụ na saịtị anyị, anyị kwụgidere ruo mgbe usoro ọhụụ ọhụụ mere ka ọ dị mma.
Google na-ahọrọ imewe mmeghachi omume. A gosipụtara nke a na ntanetị dị iche iche nke algorithm iterations na oge, na karịsịa na mgbanwe a kachasị ọhụrụ. Nmeghachi omume na-eme ka ọ dịrị Google mfe iri ari, ndeksi, ma hazie saịtị gị. Budata Nkọwapụta nke Marketo maka Mobile Mobile n'ihi na ozi ndị ọzọ.
Infographic: Gaa na Mobile ma na-azaghachi… Ma ọ bụ Lawa!
Tags: google mobile searchndị webmasters googlegoogle webmasters mkpanakamkpanaka ọchụchọnjikarịcha ekwentị mkpanaka nyochamkpanaka seowebmasters